Ungayifaka kanjani iTelegram kuLinux? | Kusuka kuLinux
Ungayifaka kanjani iTelegram kuLinux?
Ucingo Lombhalo uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngokushesha igxile ekuthumeleni nasekwamukeleni imiyalezo kanye nemiyalezo enhlobonhlobo. Ekuqaleni le nsizakalo yayisetshenziselwa omakhalekhukhwini nangonyaka olandelayo ngeplatform eningi iyatholakala ngezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kwezingu-10: I-Android, iOS, MacOS, Windows, GNU / Linux, Firefox OS, iziphequluli zewebhu, phakathi kwabanye.
phakathi izici zayo eziyinhloko singaqokomisa ukusingathwa kokuqukethwe okungokomlando kuhlanganiswe, 6 no amandla okusindisa okuqukethwe ezingxoxweni, amafayili afika ku-1.5 GB, kufaka phakathi amadokhumenti, i-multimedia nemifanekiso yezithombe, ukusesha kokuqukethwe komhlaba wonke, ibhuku lokuxhumana, izingcingo, iziteshi zokusakaza, amaqembu amakhulu, phakathi kokunye.
yocingo sebenzisa ingqalasizinda yakho ngobuchwepheshe be-MTProto. Ngaphezu kwezici eziyisisekelo, inikeza ipulatifomu ye-bot ukuthi ngaphezu kokwenza izingxoxo ezihlakaniphile futhi engenza ezinye izinsizakalo futhi ihambisane nesipiliyoni ezingxoxweni.
Ukuze ufake iTelegram kuLinux sinezindlela ezimbalwa zokufaka ezilula esingajabulela ngazo uhlelo kusuka enduduzo yedeskithophu yethu.
1 Ungayifaka kanjani iTelegram ku-Ubuntu 18.04 nakwezinye izinto?
2 Ungayifaka kanjani iTelegram ku-Debian Sid?
3 Ungayifaka kanjani iTelegram kuFedora 28 nakwezinye izinto?
4 Ungayifaka kanjani iTelegram ku-Arch Linux nakwezinye izinto?
5 Ungayifaka kanjani iTelegram kusuka ku-Snap?
6 Ungayifaka kanjani iTelegram evela kuFlatpak?
7 Ungayikhipha kanjani iTelegram kuLinux?
Ungayifaka kanjani iTelegram ku-Ubuntu 18.04 nakwezinye izinto?
Ngokusemthethweni asikho isicelo seTelegram ngaphakathi kwamakhosombe Ubuntu ngoba abathuthukisi bayo beTelegram bakhetha ukumane banikeze ifayela kanambambili elijwayelekile.
Kungakho sizokweseka indawo yokugcina evela eceleni ukufaka uhlelo lokusebenza. Kufanele sivule ukuphela bese senza umyalo olandelayo:
Kwenziwe lokhu manje sivuselela amakhosombe bese sifaka uhlelo lokusebenza nge:
Ungayifaka kanjani iTelegram ku-Debian Sid?
Kule nguqulo yeDebian kuphela sinesicelo ngaphakathi kwezinqolobane ezisemthethweni, zokufaka kuphela kumele sikhiphe esibulalayo:
Kodwa kwenzekani ngezinguqulo ezindala, Ungakhathazeki singafaka iTelegram kusuka ku-Snap naku-Flatpak ngezansi ngabelana ngemiyalo yakho.
Ungayifaka kanjani iTelegram kuFedora 28 nakwezinye izinto?
Endabeni ye I-Fedora kanye nokuphuma kwayo, singafaka lolu hlelo ckusizo lokugcina lwe-RPMFusion, okudingekayo ukuthi uyifake futhi inikwe amandla kusistimu yakho.
Ukuyifaka vele usebenzise umyalo olandelayo:
Ungayifaka kanjani iTelegram ku-Arch Linux nakwezinye izinto?
Ngecala le-Arch Linux, sinamaphakheji amabili ngaphakathi kwe-Izinqolobane ze-AUR yocingo-desktop-bin kanye ne- package yocingo-ideskithophu-git, ngokuyisisekelo nganoma yimuphi wabo uthola uhlelo lokusebenza.
Noma okunconywayo ngumgqomo ngoba izothatha njalo inguqulo yakamuva kakhulu ngqo kusuka kwiphakeji elinikezwa ngabathuthukisi beTelegram, ngaphezu kwalokho uma uzama ukuhlanganisa i-git uzokhipha kakhulu ngokombono wami.
Okokufaka kwakho udinga ukufaka Yaourt kusistimu yakho futhi kuphela kufanele wenze umyalo olandelayo:
Ungayifaka kanjani iTelegram kusuka ku-Snap?
Kokunye ukusatshalaliswa ngisho nalokhu okukhulunywe ngaye ngaphambili singafaka uhlelo lokusebenza kusuka kwiphakheji ye-snapKumele lobu buchwepheshe bunikwe amandla kuphela ohlelweni lwethu.
Manje kufanele sivule ukuphela bese sigijima umyalo olandelayo:
Ungayifaka kanjani iTelegram evela kuFlatpak?
Uma ungathandi i-Snap noma ungenayo inikwe amandla, ungajabulela iTelegram kwikhompyutha yakho efake uhlelo lokusebenza ngosizo lweFlatpak, ngendlela efanayo kufanele ube nalobu buchwepheshe bunikwe amandla kusistimu yakho.
El ukufaka umyalo yilokhu:
Ungayikhipha kanjani iTelegram kuLinux?
Uma ufuna ukususa uhlelo kuhlelo lwakho, ungakwenza ngokusebenzisa umyalo wokususa isoftware kusuka kusistimu yakho yephakeji, uma usebenzise noma iyiphi yezindlela zokufaka kusuka lapha, Ngabelana ngemiyalo yokususa iTelegram kwikhompyutha yakho:
Uma ufake nge-Snap:
Okwe-Arch Linux nokukhishwa okususwayo nge:
Endabeni kaFedora ukhipha nge:
Uma ufake uhlelo lokusebenza ngeFlatpak:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ungayifaka kanjani iTelegram kuLinux?
Ingabe kukhona umzila wale bhulogi kuTelegram?
Kusukela Ubuntu version 17.10 kukhona iphakethe elisemthethweni kumakhosombe:
Ungisebenzele lokhu kusuka ku-terminal ku-Peppermint 10, esebenza kahle, imikhonzo!
UKevin Figueroa kusho
Iphakethe le-telegram-desktop liyatholakala ezindaweni zokugcina ezisemthethweni zeLinux Mint, kepha seliphelelwe yisikhathi. Ngidinga ukufaka inguqulo yakamuva kusistimu, esikhundleni se-kanambambili elula abayinikeza kuwebhusayithi yeTelegram
Phendula uKevin Figueroa
I-LibreOffice 6.0.4 itholakala manje ngokulungiswa okungaphezu kwama-88
Inguqulo entsha yeVoyager 18.04 GS LTS isivele ikhishiwe